I-Jashen V16, ukuhlaziywa okujulile nazo zonke izici zayo | Izindaba zamagajethi
Izithambisi zokuhlanza izingcingo eziphathwayo ezingenazintambo zidla inhlabathi eningi kusuka kwabahlanzayo bamarobhothi abadumile manje. Kusuka ku-Actualidad Gadget sesivele sikutshele kwesinye isikhathi ukuthi lolu hlobo lomkhiqizo lubonakala lulungele labo abanezilwane ezifuywayo noma abafuna ukuhlanzwa okusebenza kahle nangokujulile.
Lesi sikhathi sikulethela iJashen V16 entsha, i-vacuum cleaner ephathekayo ephathekayo futhi engabizi ehlose ukuncintisana emakethe ngokunikezwa okuningi. Sizobheka lo mkhiqizo othandwayo okhona kakhulu e-Amazon nakwamanye amawebhusayithi okuthengisa online njenge-AliExpress, ukuze ukwazi ukuzinqumela uma kuwufanele ngempela.
2 Izesekeli ezifakiwe kumkhiqizo
3 Amandla okuncela nokuzimela
Siqala ngokubukeka kwangaphandle esikunikezwa yilomkhiqizo ohlukile kaJashen. Ekuboneni kokuqala ijwayelekile kakhulu kithi, futhi asikwazi ukuyisiza, iJashen V16 ibukeka ifana nezinye izinto zokuhlanza ezithandwayo emakethe njengeDyson.
Kulokhu bakhethe ngisho imibala efanayo ngombala ompunga, onsomi nokubomvu njengefulegi. Empeleni, nomklamo ojwayelekile ungasikhumbuza okuningi kwemikhiqizo eshiwo ngenhla. Kulokhu sinokukhiqizwa kwepulasitiki nezikhalazo ezimbalwa maqondana nokulungiswa.
Ngabe ufuna ukuthenga umshini wokuhlanza weJashen V16? Sebenzisa lokhu LINK.
Amapulasitiki ngokusobala abonakala ezacile ngandlela thile futhi asicaci kahle ukuthi bazomelana kanjani nokuhamba kwesikhathi, ikakhulukazi uma sikhuluma ngokuwa, lapho kubukeka sengathi izingxenye ezifana nediphozithi zingahlupheka kakhulu. Kodwa-ke, akukho lutho esingenakukucacisa kunikezwe intengo yomkhiqizo.
Ngokuphathelene nesisindo, kukhululekile ukusebenzisa ukucabangela i-ergonomics yokulawula nokuthi sinakho 2,5 Kg isisindo esiphelele. Ubude bungamasentimitha ayi-112 uma sibeka izesekeli ezifanele ukushanela, isibonelo. Ngokwesisindo nobude nakanjani sinezilinganiso ezijwayelekile.
Izesekeli ezifakiwe kumkhiqizo
Umkhiqizo unikeza uhla olwanele lwezesekeli. Ngokwethembeka, kunemikhiqizo ethengisa lolu hlobo lwe-vacuum cleaner enezinsiza ezimbalwa futhi kuyinto engingayiqondi kahle, kepha uJashen kwimodeli ye-V16 ufaka konke engikubona kudingekile noma kuncane ukukwazi ukwenza ukuhlanza kuzo zonke izindawo.
Isandiso sebhubhu yensimbi
Amabhulashi e-motorized e-Dual adjustable, womabili i-bristle ne-jalisco brush yokungcola okwengeziwe namakhaphethi
Umlomo wombhobho flat for ukuncela esiphezulu emakhoneni
Umlomo wombhobho flat ne bristles for ukuncela esiphezulu kanye ekhoneni yokuhlanza
Isisekelo sokushaja nesitoreji sesesekeli
Ngokweqiniso angiphuthelwa yilutho ngalokhu esikufakile esizokwazi ukukufisa iragi, osofa, amakhona futhi empeleni kushanela kahle futhi ngokushesha sibonga ibhulashi laso le-LED. Le LED iyathakazelisa kakhulu futhi iyaziswa kakhulu ngoba ikuvumela ukuthi ubone ukungcola kangcono ukude.
Thenga i-Jashen V16 ngentengo engcono kakhulu> LINK.
Ngokwabo, ibhulashi lejalisco kanye nokhaphethi kusivumela ukuba sihlanze nsuku zonke, njengoba sibonile ekuhlaziyweni kwethu. Le bhulashi 'lomshanelo' lihamba ngemoto ukunikeza ukusebenza okungcono ngokukhipha ukungcola ngqo phansi.
Amandla okuncela nokuzimela
Siqala ngebhethri le-lithium lamaseli ayisikhombisa lapho iyunithi yokushaja yeJashen V16 yenziwa ngayo, inani lama-2.500 mAh anamayunithi ayisikhombisa we-3,6V lilinye. Ngale ndlela, amahora amane okushaja sizokwazi ukujabulela cishe imizuzu engamashumi amane yokuzimela kuya ngamandla.
Kule migomo futhi kucatshangelwa isisekelo sokushaja, ukuhlanzwa kwephansi kuzokwanela amandla aphakathi nendawo kulokho esikwazile ukukuqinisekisa ekuhlaziyweni kwethu, lapho singatholanga khona izinkinga zokuzimela. Ngokusobala umthwalo uhamba kancane, kepha lokhu kuzosiza nasekugcinweni komkhiqizo.
Imoto inikeza inani eliphelele lama-350W Kumodi yokudonsa ephezulu kakhulu, yize sinezilungiselelo zamandla ezintathu sezizonke, zingokulandelayo:
Ubuncane> Inani eliphelele le-115W kusuka emotweni
Ephakathi> Ingqikithi ye-180W kusuka emotweni
Ubuningi> Inani eliphelele lama-350W kusuka emotweni
Ngamandla amakhulu sizothola amandla okudonsa ama-Pascals angama-22.000, okungaphezulu kokwanele uma kuqhathaniswa neminye imikhiqizo yokuncintisana nokuthi ezivivinyweni zethu kuvumele ukuhlanza phansi nokhaphethi kalula.
Okuhlangenwe nakho kwethu kuzici ezijwayelekile ngale Jashen V16 kuye kwanelisa, Kodwa-ke, kufanele ngigcizelele ukuthi asinayo inkinobho yokudonsa, sinenkinobho eyodwa evula noma icishe i-vacuum cleaner, ngakho-ke ngokungabi nale nkinobho encane, isebenzisa ibhethri elithe xaxa kunokujwayelekile.
Isibonisi se-LED Esikhundleni salokho, ikhanyiswa ngochungechunge lwamapharamitha, kepha ayihlangani, kepha sinezinkinobho ezithile esizilungisa phezulu. Ngendlela efanayo ukuthi isisindo asiyona inkinga enkulu lapho sisisebenzisa, sijabule kakhulu kulesi sigaba.
Ngokuphathelene nezesekeli, Siyalithokozela iqiniso lokuthi isiteshi sokushaja sisivumela ukuthi silingane nazo zonke izesekeli ezingaphakathi kwaso futhi sibukeka kangcono kakhulu. I-adaptha yamandla inamathiselwe kulo lonke iphakethe futhi yenza umsebenzi wayo ngaphandle kwama-frills amaningi.
Ngokuphathelene namandla okudonsa, ibhethri lindiza ngokoqobo ngamandla amakhulu, yize ngamandla aphakathi nendawo abonakala anele ekuhlanzweni okujwayelekile kokuphakelayo kanye naphansi. Amandla amancane, ngokwethembeka, awasizi kangako kithina. Amandla amakhulu yilokho okungaba ukunethezeka ukukusebenzisa ngokuqhubekayo, kepha umsindo ngeke uvumele lesi senzo. Lokhu kube wukuhlangenwe nakho kwethu okujwayelekile ngeJashen V16 entsha, umshini wokuhlanza osebenza ngezindlela eziningi ozokwazi ukuhlangabezana nezidingo eziyisisekelo zokuhlanza ikhaya lakho.
Ungathenga iJashen V16 ngalezi zinhlinzeko ezikhethekile umkhiqizo okulungiselele zona:
Imodeli ye-S16 E enesaphulelo esingu-50% kulokhu LINK nesigqebhezana «102EUROSAVE»
Imodeli ye-S18 X enesaphulelo esingu-50% kulokhu LINK nesigqebhezana «145EUROSAVE»
Izinto ezithambile kancane
Isikrini asisihle kangako njengoba sibukeka
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » UJashen V16, ukuhlaziywa okujulile nazo zonke izici zayo